Tababare Carlo Ancelotti Oo Noqon Kara Tababaraha Talyaaniga - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Ciyaaraha » Tababare Carlo Ancelotti Oo Noqon Kara Tababaraha Talyaaniga Date :November 14, 2017 Author :Hafsa Haji 4 views
Tababare Carlo Ancelotti Oo Noqon Kara Tababaraha Talyaaniga
Tababaraha seddexda jeer ku guuleystay Champions League Carlo Ancelotti ayaa lagu soo waramayaa inuu ka mid yahay tababarayaasha u tartamaya ee bedeli doona Giampiero Ventura oo noqonaya tababaraha Talyaaniga.
58 jirkaan ayaa shaqo la’aan ahaa tan iyo markii kooxda laga ceyriyay Bayern Munich bishii hore, waxaana uu doonayaa inuu xilli ciyaareed kale ka qaato.
Ancelotti ayaa laga yaabaa inuu soo jiito mustaqbalka xulka qaranka, si kastaba ha ahaatee, 23 sanno ee ugu danbeysay ee xirfadiisa tababarenimo ee kubada cagta.
Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka Marca, madaxii hore ee AC Milan iyo Chelsea ayaa haatan loo arkaa inay jecel yihiin inay ka qaataan Ventura, kaasoo la rajeynayo inuu sii joogo ama 48 saacadood ee soo socota.
Italy ayaa guuldarro 1-0 ah ka soo gaartay Sweden ciyaaraha isreebreebka Koobka Adduunka, taasoo la micno ah in aysan ku jiri doonin koobka addunnka markii ugu horeysay muddo 60 sano ah.
Goolhayaha Legian Gianluigi Buffon ayaa hore u sheegay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah ka dib guuldaradiias, halka Daniele de Rossi, Giorgio Chiellini iyo Andrea Barzagli ay si dhaqso ah u raaceen.